Qarax aad u xoogan oo ka dhacay agagaarka bakhaar ku yaala suuq Bacaad ee magaalada Muqdisho.
Amaankii wanaagsanaa ee Muqdisho oo halis ugu jira in deg deg uu daaqadda uga baxo.
Howlgalo dad badan lagu soo qab qabtay oo maanta laga sameeyay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo howlgalo ka dhan ah burcadda ka wada gobalka Sh/hoose.
Booliis Jubaland ah oo maanta lagu arkaayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose.
Xiriir intee la eg ayaa ka dhaxeeya Axmed Madoobe, IGAD iyo Kenya.
Wararkii ugu dambeeyay magaalada Kismaayo iyo dhaq dhaqaaq siyaasadeed oo halkaasi ka socda.
Xildhibaanadii mooshinka ka waday xukuumada Saacid oo ku adkeeysanaaya go'aankoodii hore.
Madaafiic xoogan oo lagu weeraray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Tuulo ku taala duuleedka Jowhar oo dab xoogan la qabadsiiyay
Wasiirka gaashaandhiga iyo xubno ka mid ah dowladda Soomaaliya oo gaaray dalka Sudan.
AKHRISO:- Dowladda Soomaaliya oo war-saxaafadeed kasoo saartay go'aankii dhawaan kasoo yeeray maamulka Soma...
Qarax aad u culus oo ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho.
Banaanbaxyo waaweyn oo lagu taageeraayo Barre Hiiraale oo maanta ka dhacay magaalada Kismaayo.
Kulan xasaasi ah oo maanta magaalada Kismaayo ku dhexmaray Barre Hiiraale iyo xubnihii IGAD ka socday.
Wiil dhalinyaro ah oo si xun loogu dilay magaalada Garoowe iyo howlgalo culus oo magaaladaasi ka socda.
Banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah madaxweynayaasha badan ee Jubaland oo Kismaayo ka dhici doona.
Bandoow lagu soo rogay shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee gobalka Sh/dhexe.
Ciidamada Al-shabaab oo dagaal ku qabsaday deegaan ay maamuleeysay dowladda Soomaaliya.
Shaqaale ajaaniib ah oo laga qafaashay xeryaha qaxooti ee dalka Kenya.
Maxamed Cumar "Mooshinkaan aan wadno micno badan ayuu xambaarsan yahay"
IGAD oo lagu eedeeyay inaysan dhex dhexaad ka ahayn waxyaabaha ka jira Kismaayo.
Xubnihii ka socday IGAD oo kulamo xaqiijin ah la yeeshay xubno badan oo Kismaayo ku sugan.
Sarkaal Kenyaan ah oo lagu dilay magaalada Gaarissa ee gobalka waqooyi bari dalka Kenya.
Xukuumada ra'iisul wasaare Saacid oo lasoo baxday wejiyadii lagu yaqaanay kuwii KMG ahaa.
May 20 2013 13:47:44
Qarax aad u xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeeyn bakhaar ku yaala suuq Bacaad degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxaasi ku waxyeelobay rag badan oo xamaali ah.
May 20 2013 13:45:52
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya laga saaray Xarakada Al-shabaab waxay magaalada sii noqoneeysay mid leh nabad iyo kala dambeeyn aan caadi ahayn, laakiinse maalmahaan dambe waxa oo dhan waa ay dhamaadeen.
May 20 2013 13:44:50
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxay howlgalo culus oo dad badan lagu soo qab qabtay ka sameeyeen degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
May 20 2013 10:58:29
Wararka haatan naga soo gaaraya gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay howlgalo culus ka wadaan wadooyinka waaweyn ee gobalkaas, kaas oo ay kula dagaalamaayaan kooxaha burcadda ah.
May 20 2013 10:56:09
Wararka ka imaanayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamo booliis Jubaland ah lagu arkaayo qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaas.
May 20 2013 08:03:13
Waa mid inta badan dadka ay isweeydiiyaan waxa xiriir ah ee xilligaan ka dhaxeeya Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo hadda sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland iyo sidoo kale IGAD iyo dowladda Kenya.
May 20 2013 08:02:25
Waxaa maalmahaan dambe magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ka jiray xaalad siyaasadeed oo aan caadi ahayn, islamarkaana laga baqaayay in halkaas ay ka dhacaan dagaal dhiig ku daata.
May 20 2013 08:01:37
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho islamarkaana wada mooshinka ka dhanka ah xukuumada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay meesha inay ka saaraan xukuumada ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
May 20 2013 08:00:50
Madaafiic aad u xoogan ayaa habeenkii xalay waxaa lagu weeraray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona madaafiicdaas ay qasaare soo gaarsiiyeen dad shacab ah.
May 20 2013 07:59:54
Tuulo lagu magacaabo Mayuungaale oo ku taala duuleedka magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa dab xoogan qabadsiiyay dad la sheegay in dagaal uu kala dhaxeeyay dad kale oo halkaasi ku sugnaa.
May 20 2013 06:53:21
Waxaa habeenkii xalay magaalada Khartuum ee dalka Sudan gaaray wasiirka gaashaandhiga ee dowladda Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminaayay oo uu ka mid yahay Jeneraal Muungaab iyo sidoo kale Maxamuud Macalin Nuur.